कुन क्षेत्रका लागि कति बजेट बिनियोजन गरियो ? बजेटमा के के छन् मुख्य कार्यक्रम ! | Safal Khabar
कुन क्षेत्रका लागि कति बजेट बिनियोजन गरियो ? बजेटमा के के छन् मुख्य कार्यक्रम !
विहीबार, १५ जेठ २०७७, १९ : २४
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैंयाको बजेट बिनियोजन गरेको छ । यो वर्षको बजेटको आकार चालु आवको बजेट भन्दा भन्दा ५८ अर्बले घटेको छ । सरकारले कोरोनाको असरलाई लक्षित गरेर स्वास्थय क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री खतिवडाले आज प्रस्तुत गरेको बजेटको मुख्य कार्यक्रम र बिनियोजित रकम साराशंमा प्रस्तुत गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले गत वर्षभन्दा आउदो वर्षका २१ अर्ब ९१ करोड बजेट बिनियोजन गरको छ । कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न ६ अर्ब पनि विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष भन्दा आगामी वर्षको लागि बिनियोजत खेलकुद क्षेत्रको बजेट साढे एक अर्बले घटाएको छ । खेलुकुद क्षेत्रको लागि कुल २ अर्ब ३६ करोड बिनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको लागि ८ अर्ब ९३ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । सांसद विकास कोषको बजेट घटाएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्रलाई ४ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारले यस वर्ष पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ७२ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
आगामी वर्ष १ हजार ८०० विद्यालय भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य रखिएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्र्तगत ६ अर्ब बजेट पनि निर्धारण गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासको बजेट भने आउदा वर्षमा सरकारले घटाएको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधारको बजेट गत वर्षको भन्दा २४ अर्ब ७२ करोडले घटाएको छ । भुकम्पले प्रभाव पारेको पुनर्निर्माणको बजेट पनि आउदो वर्ष सरकारले ६६ अर्बले घटाएका छ । सरकारले रेलमार्गहरूको निर्माणका लागि आउदो वर्ष ८ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । पूर्व–पश्चिमलगायतका विभिन्न स्थानमा निर्माण भईरहेको रेलमार्गहरूको निर्माणका लागि सो रकम छुट्याईएको छ ।
सरकारले कोरोना रोगविरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीबाहेक सबै कर्मचारीले विभिन्न शीर्षकमा पाउँदै आएको अतिरिक्त भत्ता कटौती गरेको छ । त्यसैगरि सरकारले सबै सरकारी कर्मचारीको १ लाख बराबरको कोरोना बिमा गरिदिने योजना पनि बजेट मार्फत सार्वजनिक गरेको छ । आउदो वर्ष बजेटले प्राथमिकतामा राखेको टोखा सुरुङमार्ग बनाउन ६ अर्ब ४२ करोड छुट्याएको छ । त्यस्तै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नतीका लागि १९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले प्रशासनिक खर्चमा पनि कटौती गर्ने जनाएको छ । कोरोनाविरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिएका बाहेक सबै कर्मचारीको भत्ता खारेज गरेको छ । सार्वजनिक सेवाका अस्थायी र करार कर्मचारीलाई एक लाखको कोरोना बीमासँगै योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराइने पनि उल्लेख गरेको छ । बजेटबाट सार्वजनिक गरिए अनुसार आयात निरुत्साहित गरिने र पेय पदार्थको राजश्व बढाउने भएको छ । सरकारले आगामी वर्षदेखि विद्युतीय राहदानी व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यस्तै प्रविधिलाई जोड दिदै सरकारले आगामी वर्ष थप १ करोड नागरिकको विद्युतीय अभिलेख राख्ने भएको छ । ।
सरकारले आउदो वर्ष २ हजार २ सय झोलुंगे पुल निर्माणका लागि ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका लागि ८ अर्ब २७ करोड बजेट छुटयाईएको छ । त्यसै गरि २५० पुल निर्माण गर्न, ३ सय भन्दा बढी निर्माणाधीन पुल सम्‍पन्न गर्न र १ हजार ३ सय स्थानीय पुल निर्माण गर्न १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आउदो वर्षबाट नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा बिक्री गर्ने योजना पनि सरकारले आउदो वर्षबाट शुरु गर्ने भएको छ ।
निर्माणाधिन काठमाडौं तराई फ्रास्ट ट्र्याक ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने महात्वकांक्षाी योजना पनि अगाडी सारेको छ । त्यो निर्माणको लागि ८ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले हुलाकी राजमार्गक निर्माणका लागि ७ अर्ब ५१ करोड र मदन भण्डारी राजमार्गका लागि ३ अर्ब ७ करोड बजेट छुटयाएको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई ३ वर्षभित्र एसियाली स्तरको बनाउन १२ अर्ब २१ करोड बजेट छुट्याइएको छ । त्यस्तै वैकल्पिक उर्जा कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब बिनियोजन गरेको छ ।
बजेटबाट सार्वजनिक भए अनुसार आगामी वर्ष १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा थप गर्ने योजना पनि सरकारको रहेको छ । आउदो वर्षका लागि खानेपानी तथा सरसफाइका लागि सरकारले ४३ अर्ब १० करोड वजेट छुटयाएको छ । सरकारले सुरक्षाकर्मीको पोशाक र खाद्यान्न स्वदेशमै उत्पादन गरिने भएको छ । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि १ अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बजेटबाट ज्येष्ठ नागरिक आश्रमको न्यूनतम पूर्वाधार र मापदण्ड तोकेर स्थानीय तहको निगरानीमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने गरि बजेट तोकेको छ । सो रकमबाट परिवारको संरचना नभएका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क औषधि उपचार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आउदो वर्ष १ सय ३० औद्योगिक ग्राम स्थापनाका गर्न २ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसै चुरे स‌रक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५५ करोड बजेट छुटयाएको छ ।